Ny androaniko | Aprily 2017
[Lasalasa fisainana ] 24 Aprily, 2017 23:18
Tamboho manan-tantara, na ho an'ny nitaingina azy na ho an'ny nandalo teo.
​Tena mpankafy ny tarika Lolo sy ny Tariny hatrany am-boalohany aho​. Variana ihany anefa fa nisy hirany dia tsy haiko, sambany vao reko firy taona aty aoriana. Tsy dia nanana fahafahana namonjy rindran-kiran-drizareo koa moa ny tena fa mbola sahirana tamin'izany ka izay nandeha an'onjampeo ihany no tena hay.
Mahafinaritra ahy mahita ireo mpiondana LSNT sahirana mafy ao amin'ny facebook, miezaka manao antso avo azy 9 lahy hiverina an-tsehatra miaraka na dia indray mandeha fotsiny ihany aza. Raha misy izany ka sendra mba manana ny ampy entina mankany Madagasikara aho mety mba handray voromby mihitsy an ! (soa fa mbola afaka manonofy aloha hatreto, hihihi.)
Fa rehefa mihaino ity hirandrizareo iray ity kosa - nosoratan'i Erick Manana - dia toy ny mahita maso mihitsy an'ireo bandy ireo tamin'ireny. Nonina teny Anjohy sy Andohalo izahay tamin'izany fotoana izany. Mpianatry ry Mera tao amin'ny Maria Manjaka ary efa nianatra herintaona tao amin'ny sekoly anglikana tao Ambohimanoro koa. Dia nisy namanay rahateo nipetraka teo ambanin'ny tranondrizareo tery Ambohijatovo. Noho izany, azo lazaina fa nahita ny revin-drizalahy teny ambony tamboho mihitsy nandritra ny taona maromaro ihany.
Ka raha manao dia mianoatra mankany amin'ireny fotoana ireny ankehitriny dia mihomehy irery toa azy ireo ihany koa : moa ve mba tanaty saindrizalahy tamin'izany andro izany hoe hanao hira fahatsiarovana ireny izy ireo ampolo-taonany maro aty aoriana ? Mahafinaritra satria izahay koa izao mihaino ilay hira dia mbola mahatsiaro ireny daholo - na ny mpianatry ry Mera, na ny mpianatr'Ambohimanoro, Ambohijavoto avaratra, Paul Minault, lycée Gallieni, Sefrera Andohalo, sns izay nifanaretsaka teo amin'io sampanan-dalana teo Ambohijatovo io.
Matetika kamo ny ankizy handalo eo rehefa mirava fa siatsiahan-drizalahy foana - tsy misioka moa zany fa mitssstssst e. Nefa mino aho fa am-po taralila an - huhuhu.
Tokony asiana takelaka fanomezam-boninahitra mihitsy ity tamboho ity - antsoina hoe Tamboho Lolo sy ny Tariny - fa dia manan-tantara mihitsy ho anay adolantsento nanodidina ny taona 80' iny.
[Hira ] 13 Aprily, 2017 09:13
'Mbola manantena', rap miharo kalon'ny fahiny.
Namaky ny momba ny hira aho aloha dia avy dia mailaka be hihaino ny fivoakany. Tsy nahasosotra ahy aloha e. Tany am-panombohany fotsiny no ohatran'ny niahotra kely no nahenoako an'i Salomon : tsy haiko na ilay feo-mozika no nanarona azy na lay misy mitsatoka kely teo anelanelan'ny tonony rap anankiroa no nahatonga izany. Fa nony nisosa ny ambiny dia nahafinaritra ahy.
Hira noforonin'i Noely Andriantsoavina tany amin'ny taona 2002 na 2003 tany ho any izy ity. Fa hoy i Donat Saindrotoky hoe :
"mba nanonofy aho hoe hiara-hiasa amina Ray Aman-dreny be mpiangaly kalon'ny fahiny. Nanatona an'i Ray Aman-dreny SALOMON aho ny 2017 nangataka fiaraha-miasa taminy, hamelona ity "son" ity. Fanajana be."
Tiako ilay ketrika, tiako ilay andrana. Mozika tsy misy sakantsakana, na gadona na fotoan'andro. Misaotra an'i Donat sy Salomon.